ब‌ंगलादेशका मेडिकल कलेज गुणस्तरहीन छन् भन्ने जान्दाजान्दै नेपाली विद्यार्थी पढ्न आउनु नै गल्ती' (9)
ढाका- बंगलादेशका मेडिकल र डेन्टल कलेजमा अध्ययन गरेर फर्केका नेपाली डाक्टरी विद्यार्थीको गुणस्तर र सीपका विषयमा प्रश्न उठ्न थालेपछि स्वास्थ्य खबरपत्रिकाको टिमले जेठको पहिलो साता बंगलादेशका मेडिकल र डेन्टल कलेजको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। जेठ ३ देखि ८ गतेसम्म टिमले नेपाली विद्यार्थी धेरै पढ्न जाने बंगलादेशका विभिन्न ११ वटा निजी मेडिकल र डेन्टल कलेजमा अध्ययनरत ५४ नेपाली विद्यार्थीसँग कुराकानी गरेको छ। यो क्रममा टिमले त्यहाँका मेडिकल र डेन्टल कलेजको समेत स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।
बंगलादेशका मेडिकल कजेलको अवस्था कस्तो छ, तीनले कसरी मान्यता पाएका छन् र नेपाली विद्यार्थी विद्यार्थीको भविष्य कस्तो छ भन्ने बारे टिमले बंगलादेश मेडिकल एन्ड डेन्टल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा जाहेदुलहक बसुनियासँग कुराकानी गरेको छ। बंगलादेशको ढाकास्थित सरानीविजोय नगरमा रहेको बंगलादेश मेडिकल एन्ड डेन्टल काउन्सिलको कार्यालयमा स्वास्थ्यखबरका प्रवीण ढकाल र सीताराम कोइरालाले रजिस्ट्रार डा जाहेदुलहकसँग गरेको कुराकानीः
बंगलादेश मेडिकल एन्ड डेन्टल काउन्सिलको प्रमुख काम के हो?
बंगलादेशमा भएका सबै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजको नियमन गर्नु नै यसको प्रमुख काम हो। काउन्सिलले मेडिकल तथा डेन्टल कलेजमा हुनुपर्ने मापदण्ड, पूर्वाधार, गुणस्तरका विषयमा काम गर्छ। यहाँ काम गर्ने डाक्टरको गुणस्तरका विषयमा पनि काउन्सिलले काम गर्छ।
तर, बंगलादेशका मेडिकल तथा डेन्टल कलेजको गुणस्तर र पढाइका विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ नि?
सरकारी र केही निजी कलेजको गुणस्तरका विषयमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन। तर, विशुद्ध व्यापारका लागि खोलिएका निजी मेडिकल कलेजमा भने समस्या छ। यो कुरा हामीलाई पनि अनुभव भएको छ।
अनि, काउन्सिलले किन त्यस्ता कलेजलाई कारबाही गर्दैन त?
हामीले यस्ता कलेजलाई कारबाही गर्न वा बन्द नै गराउन चाहेका हौं। तर, हामी पनि वाध्य छौं। राजनीतिक दबाबका भरमा सम्बन्धन र मान्यता पाएका यी कलेज गुणस्तरहीन छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था छ।
भनेपछि काउन्सिलले मान्यता दिएका मेडिकल कलेज भन्दैमा राम्रा छन् भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन?
यहाँका निजी मेडिकल कलेजमध्ये १५ देखि २० वटा मात्र राम्रा छन्। यीबाहेक अरुमा समस्या छ। विद्यार्थी पढाउनभन्दा पनि पैसा कमाउन खोलिएका संस्था राम्रा डाक्टर होइन डाक्टर मात्र उत्पादन गर्न पनि योग्य छैनन्। राजनीतिक दबाब तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आर्थिक चलखेलबाट खुलेका कलेज खराब हुन्।
नेपाली विद्यार्थी पनि समस्यामा परिरहेका छन् नि?
हामीले उनीहरुलाई समस्यामा पारेका होइनौं। व्यापारका लागि खोलिएका यहाँका मेडिकल कलेज गुणस्तरहीन छन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि पढ्न आउनु उनीहरुको गल्ती हो। यस्ता कलेजमा भर्ना भएपछि समस्या त परिहाल्छ नि। यहाँका गुणस्तरहीन कलेजमा किन भर्ना हुने? हामीले होइन, नेपाली विद्यार्थी आफैंले यो समस्या सिर्जना गरेका हुन्। हामीले कालोसूूूचीमा राखेका कलेजमा समेत नेपाली विद्यार्थी पढिरहेका छन्। यसमा हाम्रो के दोष? हामीले त सूूूची नै निकालेका छौं।
यहाँ मान्यता पाएका कलेजको गुणस्तर त कमजोर छ भने कालोसूूूचीमा भएकाको के हालत होला? त्यसकारण समस्याको दलदलमा नेपाली विद्यार्थी आफैं फसेका हुन्। नेपालका दलालले उनीहरुलाई फसाएका हुन्।
तपाईंहरुले यहाँका कलेजले मान्यता पाएका छन् भन्ने जानकारी दिएपछि मात्र नेपालको काउन्सिलले यहाँ विद्यार्थी पढ्न अनुमति दिन्छन् नि?
नेपालको मेडिकल काउन्सिलले हामीलाई फलानो कलेजले मान्यता पाएको छ वा छैन भनेर सोधेपछि हामीले छ भने छ, छैन भने छैन भनेर जानकारी दिने हो। मैले अघि भने नि, दबाबका भरमा मान्यता पाएका कलेज पनि छन् यहाँ। त्यही भएर मान्यता पाएको छ भन्दैमा सबै राम्रा छन् भन्न सकिँदैन। यसका लागि विद्यार्थी तथा अभिभावकले पनि कलेजबारे बुझ्नुपर्छ।
अर्को कुरा नेपालको मेडिकल काउन्सिलमा पनि त निकै भ्रष्टाचार छ नि। त्यहाँ चुनावबाट पदाधिकारी छानिने गर्छ। त्यो क्रममा कति धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा मैले पनि बुझेको छु।
यहाँका मेडिकल कलेजले सिट क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गरेका छन् भन्ने गुनासो पनि छ। यसबारेमा के भन्नुहुन्छ?
नाफा कमाउन खोलेका कलेजले भर्ना गरे होलान्। तर, काउन्सिलले निश्चित कोटाभन्दा बढीको परीक्षालाई मान्यता दिँदैन। त्यही भएर उनीहरुले हरेक वर्ष बढी भएका विद्यार्थीलाई फेल गराउने गरेको कुरा पनि सुन्नमा आएको छ। विदेशी विद्यार्थीका लागि २५ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ। तर, केही कलेजले दबाबका भरमा ५० प्रतिशत कोटा पुर्‍याएका छन्। यसको सिधा अर्थ पैसा कमाउने खेल त हो नि।
विदेशी विद्यार्थीलाई तपाईंको के सुझाव छ?
बंगलादेशका अधिकांश निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि योग्य छैनन्। विशुद्ध व्यापारका लागि खोलिएका यस्ता कलेजमा डाक्टरी शिक्षा अध्ययन गर्न आउनु भनेको फस्नु मात्र हो। त्यसकारण विद्यार्थीले यहाँ आउनुअघि कलेजको स्थलगत अध्ययन गरेर मात्र भर्नाका लागि निर्णय लिनुपर्छ। दलालका कुरामा विश्वास गरेर जीवन बर्बाद गर्नु हुँदैन।
नेपाल र बंगलादेशको दूरी पनि टाढा छैन। योसँगै विद्यार्थीले नेपालको राजदूतावाससँग पनि छलफल गरेर कलेजको छनोट गर्न सुझाब दिन्छु।
यो पनि पढौ‌ं :
बंगलादेशमा मेडिकल शिक्षा : ८० प्रतिशत कलेज गुणस्तरहीन, नेपाली विद्यार्थीको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न